Weligaa weerar ama dagaal ma lagu qaaday? Xafiiska la talinta Qoyska ayaa caawin kara - Dinutvei.no - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
Weligaa weerar ama dagaal ma lagu qaaday? Xafiiska la talinta Qoyska ayaa caawin kara
Ma jiraa dood badan iyo kharibaad badan xaga guriga? Ma leedahay lamaane dagaal badan ama ma lagu weeraray? Goob joog ma ka ahayd dagaal u dhexeeyay waalidkaaga? Haddii haa, waxaad ka raadin kartaa caawimada xafiiska la talinta qoyska.
Xafiisyada la talinta qoyska waxay siiyaan caawimo bilaasha iyo hagitaan lamaanaha iyo qoysaska la kulmaya dhibaatooyinka, khilaafaadka ama dhibaatooyinka. Xafiiska la talinta qoyska waxaa uu la shaqeeyaa arrimaha cadhada iyo dagaalka, tusaale ahaan. Xafiisyada qaar waxay bixiyaan adeegyada shakhsiyaadka dadka loo gaystay dagaalka iyo/ama dembiilayaasha dagaalka.
Waxaad lasoo xidhiidhi kartaa xafiiskaaga La talinta qoyskasi aad ballan u qabsato ama u hesho macluumaadka ku saabsan sida xafiiska la talinta qoysku kuu caawin karo. Muddooyinka mashquulka ah, qoysaska leh carruurta ayaa ahmiyada la siin doonaa.
Adeegyada lagu bixiyo xafiisyada la talinta qoyska way kala duwanyihiin oo waxaa ku jira kara
daawaynta lamaanaha, daawaynta qoyska,
koorsooyinka maaraynta cadhada iyo hagitaanka maaraynta cadhada ee waalidka.
dhexdhexaadinta dhacdada kala maqnaanshaha iyo burburka xidhiidhka, ka caawinta wada shaqaynta waalidka iyo xuquuqaha booqashada
la talinta waalidka iyo barnaamijyada xidhiidhada kala duwan
Shaqaalahaxaga xafiisyada la talinta qoyska waxaa ka mid ah khabiirada cilmi nafsiga, macalimiinta iyo shaqaalaha bulshadda ku takhasusay daawaynta qoyska. Shaqaalahu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Haddii aanu xafiiska la talinta qoysku awood u lahayn inuu ku siiyo caawimada aad u baahantahay, waxaa laguu gubin doonaa wakaalad kale. Xafiisyada la talinta qoysku waxay bixin karaan turjubaan marka ay lama huraanka tahay.
Badanka xafiisyada la talinta Qoyska waxaa maamusha dowladda waxayn qayb ka yihiin Maamulka Carruurta Norway ee Carruurta, Dhalinyrada iyo Arrimaha Qoyska (Bufetat). Xafiisyada kale ee la talinta Qoyska waxaa iska leh ururo diimeed oo waxay la leeyihiin heshiiska hawlgalid ah Bufetat. Adeegyada waxaa la bixiyaa iyaddoon loo eegin caqiidada iyo diinta istilaamayaasha.
Ka raadi xafiiskaaga la talinta Qoyska maxaliga ah barta dinutvei.no
Liiska xafiisyada la talinta Qoyska ee Guddida Maamulka Carruurta Norway, Barta internatka Dhalinyrada iyo Arrimaha Qoyska